Banyere Anyị - Jinbiao Construction Materials Co., Ltd.
Noise Ihe mgbochi-Style
Hebei JINBIAO arụ ụlọ ọgbara ọhụrụ Corp., LTD.
Anyị isi ebumnobi na-eweta anyị ahịa n'ụwa nile na ezi mma, asọmpi price, afọ ojuju nnyefe na magburu onwe ọrụ. Ahịa afọ ojuju bụ anyị isi ihe mgbaru ọsọ. Anyị n'anabata ka ị gaa na anyị showroom na ụlọ ọrụ. Anyị na-atụ anya ka azụmahịa mmekọrita na gị.
Hebei Jinbiao Construction Materials na-tọrọ ntọala na 1986 ọkachamara na mmepụta nke na-ewu ihe. Anyị factory enyene karịa 800,000m2 ebe, na ihe karịrị 400 ndị ọrụ, 40 ọkachamara, aha obodo nke RMB 60.4 nde, na-eru 500 nde yuan nke liquidity.In Shijiazhuang, 26 December 2014, ụlọ ọrụ na e depụtara na ngwaahịa mgbanwe, na-aghọ mbụ mpaghara depụtara ụlọ ọrụ na ebe, nke ngwaahịa na-aha gold ọkọlọtọ ntupu, mkpọtụ mgbochi na aluminum formwork ika. Ná mmalite 90, Jinbiao gafere ISO9001- 2000 quality asambodo gụnyere "Aaa ọkwa quality asambodo", "Hebei ógbè pụtara ìhè ụlọ ọrụ", "tụkwasịrị obi enterprise", "mma mmepụta" na ndị ọzọ asambodo ukpono.
Hebei Jinbiao Construction Materials Tech Corp., Ltd. na-emekwa ụfọdụ na mmepụta na mmepe nke waya ntupu fencings, barbed wires na yiri ngwaahịa dabeere na Anping, ama waya ntupu Land of China.
Product Quality: Anyị na ngwaahịa agafeela ISO9001 akwụkwọ nke àgwà management usoro, OA ngwaahịa asambodo, ma guzosie ike a ogologo oge imekọ ihe ọnụ na Na Oru na Southeast Asia. E wezụga JINBIAO esetịpụrụ elu a pụrụ iche àgwà nnyocha otu iji hụ na niile na ngwaahịa ndị ruru nnọọ eru.
Production ikike: JINBIAO Company nwere 3 mmepụta osisi tinyere waya ntupu nsu, Sound megidere na Aluminium Formwork. Daily mmepụta ike nwere ike iru 18km nsu, 5000 m2 ụda mgbochi, na 8000 PC H ígwè post. Aluminum Formwork e mere na-emepụta ihe karịrị 10 tent ụlọ kwa ọnwa.
Jinbiao a kwadebere n'ụzọ na n'elu 80 tent nke mbụ na klas mmepụta nnyocha ma R & D ngwá ọrụ na-emepụta square post waya ntupu nsu, welded waya ntupu mpịakọta, yinye njikọ nsu, ọkụkọ waya ntupu, atụrụ / ehi / ubi nsu, barbed waya mkpọtụ mgbochi maka n'ụwa nile ahịa.
Anyị nwere a ọkọlọtọ mmepụta na zuru ezu àgwà akara usoro iji hụ na elu àgwà ngwaahịa izute ahịa anyị 'mkpa.
Anyị ụlọ ọrụ emewo ndibọhọ a aha ọma na China na anyị mbupụ ngwaahịa ọtụtụ mba na mpaghara.
N'ihi na gị fencing mkpa, biko kpọtụrụ anyị ugbu a!
Anyị ọzọ mgbaru ọsọ bụ gafere na-atụ anya nke ọ bụla ahịa site na àjà pụtara ìhè ahịa ọrụ, mụbara mgbanwe na bara uru karị. All na niile, na-enweghị ndị ahịa anyị na anyị anaghị adị; enweghị obi ụtọ na n'ụzọ zuru ezu afọ ndị ahịa, anyị na-ada. Anyị na-achọ ndị na n'ùkwù, dobe ụgbọ mmiri. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị na-akpali anyị na. Olileanya na ime ahịa gị niile. Elu àgwà ma na ngwa ngwa e bubatara!
Ebe ọ bụ na anyị oruru, anyị na-rụọ ọrụ ka anyị na ngwaahịa na ahịa ọrụ. Anyị na-enwe ike nye gị a dịgasị iche iche nke elu mma ntutu na ngwaahịa na asọmpi ahịa. Ọzọkwa anyị nwere ike dị iche iche ntutu ngwaahịa dị ka gị n'omume. Anyị na-esi ọnwụ na elu àgwà na ihe ezi uche price. Ewezuga a, anyị na-enye ihe kasị mma OEM ọrụ. Anyị ji obi ụtọ na-anabata OEM iwu na ndị ahịa n'ụwa nile na-arụkọ ọrụ na anyị ka anyị ibe mmepe na-eme n'ọdịnihu.
Ugbu anyị sales netwọk na-eto eto na-, rụọ ọrụ àgwà izute ahịa ina. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na-ọ bụla na ngwaahịa, biko kpọtụrụ anyị na oge obula. Anyị na-atụ anya na-akpụ ọma ahịa mmekọrịta gị na n'ọdịnihu dị nso.
Anyị na-enye ndị dị iche iche nke ngwaahịa a na ubi. E wezụga, ahaziri iwu ndị dịnụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ị ga-enweta anyị magburu onwe ọrụ. Na otu onye okwu, gị afọ ojuju na-ekwe nkwa. Mmadụ Bịa na ileta anyị ụlọ ọrụ! Maka ozi ọzọ, biko na-anyị website.If n'ihu ase, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Emechara nke zuru oke-Rongwu High-spe ...
Halllọ ngosi ihe ngosi ọhụrụ
Ngwa aluminom nke Jinbiao